အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက်? အကောင်းဆုံး စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
ပုံစံ - STP-H2S-2 Series
စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Automatic2Track Hot-ဖြတ်ပါဗျာ့-Air Tension Control ဖြင့် Shirt Bag ပြုလုပ်သည့်စက်
စူပါမြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှု.စွမ်းရည်:၂*350 pcs/မိ. (၂ လိုင်း)
မြန်နှုန်းမြင့် အော်တို-punch စနစ်.10sec ခေါက်ရုံဖြင့် 1 Punching cycle.
ပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်ခြင်း မရှိပါ။;ရုပ်ရှင်အကြိုမရှိ။-စက်ပစ္စည်းကို ချိတ်ဆက်၍ ဖလင်ပြောင်းလဲမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။.
စနစ်အားလုံး H.အမ်.ငါ.နှင့် P.ဌ.ဂ.ထိန်းချုပ်မှု,အားလုံး-လုပ်ဆောင်ချက်ပြသခြင်း။,ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
လေးလံသောတာဝန် ရုတ်သိမ်းခြင်း auto unwind နှင့် Air shaft သည် ဖလင်လိပ်ထည့်ရန် လွယ်ကူသည်။.
Punch ၏ စွမ်းရည်
STP-800H2S-2 ၂ x ၃၆၀ 300~၇၀၀/
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ မက်တယ်။.၃၅၀*2
STP-1000H2S-2 ၂ x ၄၆၀ 300~၇၀၀/
STP-1200H2S-2 ၂ x ၅၆၀ 300~၇၀၀/
STP-500HS-1 ၁ x ၄၆၀ 300~၇၀၀/
မက်တယ်။.20 မီလီမီတာ မက်တယ်။.၃၅၀*1
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/super-high-speed-fully-auto-t-shirt-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan နှင့် suppling နှင့်တင်ပို့, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက်။ တစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံအများအပြားနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြ Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြားနာမည်ကောင်းကိုခံစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှာခြင်းငှါရှိသမျှသောလောကီအစိတ်အပိုင်းများမှဖောက်သည်များ, စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့်မိတ်ဆွေများကြိုဆိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံး စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် စူပါမြန်နှုန်းမြင့် Fully Auto T Shirt Bag စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ